FENOARIVO-ATSINANANA : Nodimandry i Tsiariana, kalazalahy amin’ny fitendrena angorodao
Nodimandry teo amin’ny faha-72 taonany tao amin’ny Hopitaly Be Fenoarivo-Atsinanana, ny alin’ny alahady 3 mey teo i Tsiariana. Mpitendry angorodao sy mpihira izy. Teraka ny taona 1948 tao Vohilengo Fenoarivo-Atsinanana. 6 mai 2020
Ny taona 1963 no nanomboka nihirany sy tena nahafantarana azy teo amin’ny fitendrena angorodao. Anisany nampalaza azy ny fampandihizana amin’ny angorodao mandra-maraina. Efa namoaka sangan’asa tao amin’ny Discomad fahiny izy. Efa nandray anjara tamin’ny fifaninanana maro momba ny fitendrena angorodao izay nahazoany mari-pankasitrahana maro. Efa nahazo « Chevalier de l’Ordre National » izy ary efa nosalorana ny « Officier de l’Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture » ihany koa.
Namela kamboty 10 mianadahy izy. Ireo zanany ireo izay maro no lasa mpitendry angorodao koa. Ny alin’ny alahady 3 mey sy ny tapany maraina ny alatsinainy 4 mey, dia nandrasana tao amin’ny Tranompokonolona Fenoarivo-Atsinanana ny razana noho ny fangatahan’ny talem-paritry ny serasera sy ny kolontsaina Analanjirofo ary ny fianakaviamben’ny mpanakanto Fenoarivo-Atsinanana tamin’ny fianakaviana. Ny tolakandron’ny alatsinainy 4 mey no nihazo ny tany fiaviany, Vohilengo. Atao anio alarobia ny fandevenana azy.
Nisaotra ireo rehetra nifanampy taminy tamin’ny fikarakarana ny razana niaraka tamin’ny fianakaviana nanomboka tao Fenoarivo-Atsinanana ka hatrany Vohilengo ny talem-paritry ny serasera sy kolontsaina any an-toerana. Izahay eto amin’ny gazety Ino Vaovao Faritra dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany manontolo.